Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football any Ivory Coast Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny baolina lavitr'ezaka fantatry ny anarany manokana; 'Mr T'. Ny rakipejin'ny Tantaram-pianakaviana Cheick ary ny tantaram-piainana tsy fantatra momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Alefaso aloha.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Tany am-piandohana
Sary avy amin'i Cheick Tiote
Ny lohataona Chekey Ismael Tioté dia teraka tamin'ny 21 June 1986 ao Yamoussoukro, renivohitry Côte d'Ivoire renivohiny, Late Mr sy Mrs Toite. Izy dia resy lahatra fa tanàna iray mahatsiravina, mahantra ao Shanty ao Yamoussoukro. Nilaza izy fa izao no inoany fa natanjaka izy.
Nipoitra avy teo am-bavahadin'ny rà mandriaka izy izay nanimba ny tanànany ary nitarika ny fahafatesan'ny ray aman-dreniny.
Taorian'ny fahafatesan'ny ray aman-dreniny, i Tiote dia voatery nifindra tany amin'ny tanàna nahaterahan'i Abidjan izay heverina ho tanàna azo antoka. Niaiky izy fa ilay tanàna no nitondra azy tany amin'ny baolina kitra.
Nanomboka nandeha nilalao tsy fotsy izy football football amin'ny taona 10, tsy manana azy roa kiraro ary indraindray mampiasa paingotra mandra-pahatongan'ny 15.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Ny fahafatesany
Ny alatsinainy tolakandro, June 5, 2017 dia natsipy tanteraka ny fatoram-pirahalahiana baolina kitra baolina kitra, taorianan'ny nahafatesan'i Ivoriana sy ny kintan'i Newcastle United, Cheick Tiote taloha. Tatitra manatratra LifeBogger.com dia manazava fa maty tamin'ny taona 30 ny zaza maty tao amin'ny Cheick rehefa avy nirotsaka tamin'ny fampiofanana niaraka tamin'ny klioban'ny Beijing Enterprises. Mampalahelo fa nolazaina fa hiandry zazakely vao afaka andro vitsivitsy aorian'ny fahafatesany izy, saingy nandalo izy ary namela zanaka telo talohan'ny nahafatesany.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Dokotera mpangalatra azo itokisana hanasitranana ny ratra taminy
Maro ny fanontaniana nipoitra taorian'ny nahafatesany. Toy ny hoe ... Fa inona no novonoin'i Cheick Tiote? ..
Nisy tatitra izay manazava ny fomba namonoana ireo mpitsabo tao Witch tamin'ny Cheick Tiote. Mety ho gaga ianao raha tsy fantatrao ny momba ny tantarany.
Ilaina ny manamarika fa ny mpilalao matihanina amin'ny herisetra dia manana fahazarana mitazona mpitsabo azo itokisana mba hanasitranana ny fahavoazan'ny baolina kitra. Nilaza izy fa ny dokotera mpilalao dia nanasitrana azy fony izy niady mafy tamin'ny tongony ankavanana ary nahatonga azy hijaly sy nanakana ny hetsika. Tamin'izany fotoana izany tao Newcastle, Tiote dia nampiasaina avy amin'ny tompony Magpies Mike Ashley hiverina any amin'ny Côte d'Ivoire mba hahita ny mpitsabo mpanitsakitsa-bady.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tioté dia avy amin'ny fianakaviana silamo mafana fo. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Newcastle Chronique déterminée, Hoy i Tioté nilaza fa nanana rahalahy sy anabavy sivy izy. Niroborobo tao Abdijan izy, nandao ny fianarany tamin'ny fahazazany, nilaza izy fa,
Taiza i Tiako Tiot
"Ny baolina kitra dia efa zava-dehibe tamiko hatramin'izay. Niroborobo tao an-tanànan'i Shanty, ratsy indrindra any Abdijan aho, nahafantatra izay tiako hatao ary nanao izay hahalalako fa io no ho fiainako. Saingy niasa aho ary niasa sy niasa ho azy ary noho izany asa mafy izay vitako izany. "
Manohana ny rahalahiny dimy sy ny anabaviny telo miaraka amin'ireo vola azony tamin'ny baolina kitra izy.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Relationship Life
Manan-janaka roa izy miaraka amin'i Madah vadiny voalohany. Niaina tranom-bahiny 1.5million tany Ponteland akaikin'i Newcastle ry zareo.
Tamin'ny 29 September 2014, notaterin'ny Newcastle Chronicle fa i Tioté dia nanambady vady faharoa Laeticia Doukrou, renivohitry ny Côte d'Ivoire, Abidjan.
Efa nisy ny fanambadiana talohan'ny nanombohana azy ny vanim-potoana. Ny mpikatroka Jean Musampa, dia nanamafy ny fanambadiana tamin'ny gazety teo an-toerana, nilaza izy "Azoko lazaina fa nanambady izy ary ny fanambadiany faharoa."
Nitatitra ny Sun fa ny vehivavy voalohany dia 'mahazo aina amin'ny voalohany' miaraka aminy manambady fa taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hiantso ny fifandraisana satria nilaza ny teniny izy 'Nandeha nitsena ny mamanay izy ary nanazava taminy ny antony ilany hahazo vady fanampiny. Nampiasa ahy toy ny mop izy. Izy dia kisoa '.
Fotoana fohy taorian'izay, dia nitatitra izy fa nifarana tamin'ny zavatra nataony tamin'i Nikki ilay tompovavy izay niteraka zaza iray ho azy izay antsoiny hoe Raphael.
Rehefa nitsikera momba ny fananana vady 2 sy ny tompovavy, dia haingana ny mpilalao baolina kitra Newcastle Cheick Tiote, niaro haingana ny fomba fiainany tamin'ny filazana "Tsy misy mahazatra ny fananana mpivady roa sy tompom-pananana."
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Mankany am-ponja
Tamin'ny volana oktobra 2013 Tiote dia nanam-bintana mba hisorohana ny fonja rehefa nanaiky ny hanana fahazoan-dàlana mitondra fiara sy fisotroana ihany koa.
Nomena fe-potoana naharitra sivy volana sy ora 180 avy amin'ny asa fiarahamonina tsy mandray karama izy. Nilaza i James Goss, mpitsara, i Tiote, 27, fa tsy nigadra noho ny fangatahany ho meloka.
Navelan'ilay mpitsara izy, nilaza hoe: 'Tsy isalasalana fa, amin'ny fampiasanao ny talentanao manan-danja, dia ho afaka hanampy ny hafa ao amin'ny fiarahamonina ianao amin'ny famporisihana azy ireo sy ny fandanjalanjanao ny fahaizanao amin'izany.'
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Toeram-piasana an-dalam-be any Nigeria
Tamin'ny febroary 2014, Tioté dia nanangana andian-dalan'ny lamaody lehilahy antsoina hoe TIC, niaraka tamin'ny designer Yusuf Abubakar, Nizeriana izay nitantana azy.
Araka an'i Akubakar; "Tena mahafinaritra i Tiote ary miondrika amin'ny olombelona. Rehefa nihaona taminy aho dia tena kintana tokoa aho fa tena sariaka izy. Matetika izy no miantso ahy ho lehibenareo na dia miasa eo ambaniko aza ianao. Hitako fa tsy mampino ny miasa aminy. Noraisiny ny zavatra lazaiko ary tsara izany. "
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Karohy amin'ny famintinana
Nanomboka ny asany miaraka amin'ny Ligue Ivorianin'ny ligy FC Bibo. Tao amin'ny 2005, dia nalain'ny klerika Belarosiana Anderlecht izy, ary avy eo dia nanao ny laharam-boninahitra nataony tamin'i Anderlecht izy tao amin'ny lalao Belarosiana Belzika izay very tany Geel. Nandritra ny vanim-potoanan'ny 2007-08, dia nitaky vola tamin'i Roda JC izy mba hiara-hiasa amin'i Exo FC Bibo sy Sekou Cord, ekipa iraisam-pirenen'ny ekipa Feyenoord. Tamin'ny 2 ny volana Oktobra 2008 Cheick Tioté dia nanao sonia ho an'ny ligy Eredivisie eo anelanelan'ny FC Twente noho ny sanda voalaza fa manodidina ny $ 750,000. Nahazo ny lohateny holandey tamin'ny vanim-potoana 2009 / 10 izy ary nasongadina ihany koa tao amin'ny Ligy Eoropeana sy ny Ligin'ny Champions. Tioté dia nanatevin-daharana ny Premier League anglisy Newcastle United tamin'ny 26 August 2010 noho ny vidin'ny £ 3.5 tapitrisa.
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -LifeBogger Rankings
Manolotra sombin-dahatsoratra momba an'i Tiote's tough guy.